Taorian’izay dia niroso tamin’ny fiarovan-tenany ny jly Raoelina Jean...
… ny kolonely isany Jadifara sy Andriamihoatra hanao asa an-terivozona mandra-pahafaty.
Nolavin’ny Fitsarana avokoa ny fangatahan’ny Me Razafimanantsoa Hanitra, mpisolovava an’ireto farany ny amin’ny tokony hamelana handeha aloha ny fampiakarana ny raharaha any amin’ny Fitsarana fandravana nataon’izy ireo mikasika ny didim-pitsarana efa navoakan’ny Fitsarana ady heloka bevava, tamin’ny volana aogositra 2010 io. Ankoatra izay ihany koa dia nandroso ity mpisolovava ity fa tokony hisy ny taratasy avy amin’ny minisitry ny Foloalindahy ahafahana manao famotorana an’ireo voampanga amin’ny maha miaramila azy ireo.
Niaro tena ora roa
Naroso ihany ny Fitsarana na teo aza izay fangatahana izay. Taorian’izay dia niroso tamin’ny fiarovan-tenany ny jly Raoelina Jean. Nanomboka tamin’ny 10 ora sy sasany io ary tsy nifarana raha tsy tamin’ny 1 ora latsaka folo minitra. « Efa tsy tao Ambohitsorohitra intsony aho fa efa nivoaka taty ambany no nisy ilay tifitra tamin’ny 7 febroary. Tokony hantsoina ny jeneraly Randriamamory Alain, Talen’ny fiarovana teo anivon’ny fiadidiana ny Filoham-pirenena tamin’izany fotoana sy ireo tompon’andraikitry ny filaminana tamin’ny fotoan’andro mba hahafahana mahita ny marina mikasika ity raharaha ity », hoy ny voampanga.
Tsy nisy naharesy lahatra ny mpitsara anefa izay fiarovan-tena izay, ka izao niafara tamin’ny fanamelohana izao indray.
Nilaza ny hangataka fandavana ny didy ny mpidolovava ireto manamboninahitra ireto.